Xilliga Shukaansiga & Lacag weydiinta Hablaha Soomaaliyeed.. | Balanbaalis.Com	Xilliga Shukaansiga & Lacag weydiinta Hablaha Soomaaliyeed.. – Balanbaalis.Com
Xilliga Shukaansiga & Lacag weydiinta Hablaha Soomaaliyeed..
Jul 21, 2016 - jawaab
Waa hubaal qaarkood Hablaha Soomaaliyeed inay la yaabaan warbixintaan markii ay akhristaan,hase ahaatee nuxurka iyo ujeedkeyga waa gunta iyo dulucda aad soo akhriso dhamaadkeeda.
Ma wada dhahayo waa dhamaantood hase ahaatee hore ayaa loo yiri “Badda Hal Malaay ayaa qurmiya”.
Markaan ka eegno kuwa Soomaaliya jooga iyo kuwa aan qurbaha ku aragnay waxa ay badankood qiimo sare iyo qadarin ka badan kuwa kale ay u hayaan raga filkooda ama facood ah ee jeebka wax ugu jiraan.
Tusaale Ahaan:-Waxa aad arkeysaa gabdho da’da qaan gaarnimada ku Jira misana mobilka gacanta wata islamarkaana raga uhaasaawe yimaada ama teelka kasoo waca inay lacag weydiistaan.
“Soow Ceeb maaha inaad qof ku qabin ku dhahdo lacag isii toos ama sarbeeb sidaad rabto uweydiisee,shimee mudan tahay in qofkaasi ku siiyo lacag iyo wixii aad uga baahato,miyaaneey aheyn Sharaf dhac dadkaada xitaa usoo jiiday mise waxaad aaminsan tahay Jaceylku inuu lacag yahay?
Waa Su’aalaha ugu badan ee maskaxdeyda isweydiiso islamarkaana qofka looga baahan yahay inuu jawaab sax ah ukeeno siiba gabdhaha dhuunta furan ee lacagta ka dalbanaya ragga shukaansiga ugu yimaada ama telka kula hadla.
Qiimeyn aan ku sameenay hablaha lacagaha shukaansiga xilligiisa ku hela waa kuwa ugu badan ee khilaafkoodu badan yahay,lagana yaabo in dhowr nin ay sidaas oo kale ula socoto (Ula Haasaawdo).
Gabar iyo Garoorb wixii aad tahayba sow ma ogid ninka ragga ah inadan ka caqli badneyn xitaa hadii uu ku siiyo wixii aad dalbato dahab iyo dollar adigoo xaaskiisa aheyn in hadana sharaf dhac ay adiga kugu tahay.
Diin ahaan xitaa Culimada hala soo weydiiyo waxa ay ka qabto mowduucaan oo kadibna jawaabta kasoo baxda aan aragno sax ahaan iyo khalad tey noqotaba.
Gebo gabo:-Walaasheyda waxaan ku leeyahay Lacag haku doorsan Sharaftaada iyo Mustaqbalkaaga oo god aad geliso ee ka fekir meesha kuu roon adigoo qofka heli kara si wanaagsan inad ula socoto haku xujeyn lacag iyo Shoobin inuu bac ku keeno.
AFEEF:-Macquul waxaa ah in gabadhii aragtaa qoraalkaan ay is tiraahdo warbixinta wariyaha qoray malaha asigeey ku dhacday xaashaa lillaah waxa mar kasta aan soo bandhigayo waa mid bulshada ka dhex keeno.